diary | Ankapobeny | 2
Mandeha ny fotoana an! Efa ho efa taona sahady tokoa izay no nanoratana voalohany tamin'itony blaogy itony. Efa be ny rano nikoriana tambany tetezana hoy ry zareo vazaha izay. Ny mpitondra aza efa niova. Na izaho koa aza mba niova. Taloha aho tsy mba nieritreritra hanao tononkalo amin'ny...
Misaotra anao aho ry fiaraben'ny Vatsy
Efa amin'ny dimy sahady. Namboariko faramparany ny entako de niomana ny hidina aho. Efa nifampitaona koa ry zalahy sasany ka vetivety de vory izahay hiakatra. Rehefa zoma hariva toy izao tokoa mantsy de misy vitsivitsy izahay mpiara-miasa no miakatra any an-drenivohitra. Vetivety ihany de...
Na dia andro tsy fiasana aza de tsy maintsy hoe nifoha maraina ihany. Raha tsy izany tokoa mantsy tsy ho tratra ny fotoana amin'ny 7 sy fahefany eny amin'ny square. Efa ela tokoa izay no tsy mba nandehanana nitsangatsangana niaraka tamin'ny fiangonana. Tamin'ny 7 ora sy sasany mahery...